Amaphazili 🥇 Faka futhi ujabulele kusuka ku-Emulator.online
Qaphela: ukudlala inguqulo yeselula ujikeleze isikrini
Amaphazili. Ngezansi sizokukhombisa konke odinga ukukwazi ukuqonda lo mdlalo omuhle. Kusukela encazelweni yayo ye-etymological, imvelaphi yayo, izinzuzo zayo, izinhlobo zamaphazili akhona namasu wokuyixazulula ngokushesha okukhulu.
Amaphazili: Idlalwa kanjani igxathu negxathu 😀
Ukuze wenze a Puzzle online mahhala, kufanele nje landela le miyalo igxathu negxathu:
I-Paso 1. Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yomdlalo Emulator.ku-inthanethi
I-Paso 2. Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kufanele kuphela hit play futhi ungaqala ukukhetha iphazili oyithanda kakhulu. Ungakhetha isithombe osithanda kakhulu, nangemva kokuyikhethaUngakhetha futhi inani lezingcezu iphazili ezoba nazo.
Isinyathelo se-3. Nazi izinkinobho ezithile eziwusizo. Can "Faka noma susa umsindo", Nikeza inkinobho"Play"Futhi qala ukudlala, unga"Misa kancane"futhi"Qala kabusha"noma kunini.
Isinyathelo se-4. Hlanganisa zonke izingcezu ngendlela yokuthi isithombe osikhethile sidalwe.
Isinyathelo se-5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza "Qala kabusha" ukwenza amanye ama-puzzle.
Yini iphazili? 🧩
Un iphaziliKuyinto a umdlalo owenziwe ngezicucu ezahlukahlukene okumele zixhunywe zenze okuphelele, ngokuvamile isibalo, imephu noma izithombe. Kuyinto umdlalo omdala kakhulu. Ngaphandle kokungabaza, enye yezinto zokuzilibazisa ezinhle kakhulu ezinganeni nakubantu abadala. Ngaphezu kwalokho, kufaka isandla ekwakhiweni kochungechunge lwezinzuzo ze-psychomotor.
Kepha noma ngubani ocabanga ukuthi iphazili isanda kusungulwa akulungile. Njengoba ngishilo, mdala kakhulu. Futhi, okokuqala, ukusungulwa kwakhe kwakungokwenye inhloso.
Umsuka wePuzzle ☝️
Yize izazi-mlando zingakasho ukuthi iphazili yavela nini, kunemibono ngemvelaphi yayo.
Okunye okwamukelwa kakhulu ukuthi umdwebi wamabalazwe waseNgilandi, UJohn Spilsbury, wasungula umdlalo. Ukuze abafundi bakhe bafunde i-geography, ngo-1760 uJohn wenza iqoqo lezingcezu ezinezingxenye zomhlaba. Ngokubambisana, bakha imephu yomhlaba. Usebenzisa amabhodi enziwe ngokhuni I-Spilsbury unikeze abafundi bakhe ubumnandi nokufunda.
Kodwa abanye bathi iphazili lasungulwa ngamaShayina. tangram Ithoyizi lasendulo eChina. Inezicucu eziyisikhombisa kuphela, kepha zivumela ukwakheka kwezithombe eziningana. Kodwa-ke, kuhluke kakhulu kwiziphicaphicwano esizijwayele.
Eqinisweni, ngemuva kokusungulwa kweSpilsbury, iphazili laduma kakhulu. Okusho ukuthi, zazenziwe ngesandla, ngakho zazibiza kakhulu. Bekuphela ku-Industrial Revolution (1760-1820 / 1840) ukuthi iphazili yaba eshibhile. Lokhu kungenxa yokuthi ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kweRevolution Banikeze amathuluzi adingekayo okwenza ithoyizi lisheshe futhi lishibhe.
Ngesikhathi Sokwehla Okukhulu Kwezomnotho (1929), ithoyizi labhekana nokukhula ekukhiqizeni. Kwakukhona ngisho nokuqasha iphazili ngamasenti ayi-10 ngehora! Ngaphezu kwakho konke, abantu babefuna ukwaneliseka nokweneliseka lapho bedlala ngale nto yokudlala.
Umsuka wegama elithi Puzzle
Igama elithi Puzzle (iphazili ngeSpanish) kuyaziwa futhi kusetshenziswa yiwo wonke umuntu. Umsuka wayo isiNgisi. Umsuka wawo we-etymological uvela esiLatin, kusuka esenzweni sesiLatini ngizobeka ( kusho ukuthi beka).
Uyenza kanjani iphazili: Amathiphu
Khetha iphazili efaneleke kakhulu
Inkomba yeminyaka ekuphaketheni iyasiza, kepha akumele isetshenziswe njengesimo esikhethekile. Futhi cabanga ukujwayela kwengane yakho ngalo mdlalo. Uma ingane ingenakho okuhlangenwe nakho kwangaphambilini, nikela kumamodeli anezingxenye ezimbalwa, aze ajwayele.
Yiba nendawo efanelekayo yokukhweza
Lapho iphazili selithengiwe, kubalulekile khetha ukumiswa okufanelekile kwenhlangano. Okungcono, indawo kufanele ithule, lapho kungekho khona ukugeleza okusindayo kwabantu.
Khumbula ukuthi lo msebenzi udinga ukugxila okuningi nokuthi umsindo owedlulele noma ukunyakaza kungaphazamisa. Unalokho engqondweni, kufanelekile ukukhetha ikona lekamelo noma elinye ikamelo elinetafula elikhulu.
Futhi, kubaluleke kakhulu ukuqukatha imizwa futhi ungazisabalalisi izingcezu ngokushesha nje lapho ufika ekhaya, njengoba zingalahleka, ezizogcina zibangele ukukhungatheka. Cabanga, ngemuva kwezinsuku zokuzinikezela, uzothola ukuthi isithombe asiphelele.
Sebenzisa ithempulethi njengomhlahlandlela
Sebenzisa umhlahlandlela njengesethenjwa isiphakamiso esingenakushaywa indiva. Isikhathi esiningi, ithoyizi ngokwalo liletha ukukhiqizwa kabusha kwesithombe okufanele sihlanganiswe.
Gcina le modeli ifinyeleleka kuwo wonke umuntu osizayo ngenqubo yomhlangano, ukuze babhekise kuyo lapho benemibuzo. Uma kunjalo, ukunakwa ngemininingwane kungenza umehluko nokuqedwa kwejubane.
Qala ngezingcezu zekhoneni
Ithiphu yethu yokugcina iphathelene nokuchaza isu elihle kakhulu lomhlangano, uqobo. Ngalo mqondo, kunconywa ukuqala ngamakhona, izingcezu zazo zinamacala aqondile. Ngale ndlela, ungaveza usayizi wokugcina wesithombe.
Uma inani lezingcezu likhulu kakhulu, enkulu kunazo zonke emhlabeni iletha ndawonye ezinye umxhwele Izingcezu eziyizinkulungwane ezingama-40 , I-block Assembly nayo ingaba enye indlela enhle, ikakhulukazi uma kunezingane ezibambe iqhaza. Ngamunye wabo angathatha umthwalo wezingcezu ezincane bese kuthi umuntu omdala athathe umthwalo wokuzihlanganisa.
Cishe ngasekupheleni, sinikeza umhlahlandlela owodwa ngaphezulu: ukuphoqa ukulingana phakathi kwezicucu isimo esingadingekile. Lapho ubona ukuthi azincedi, funa ezinye izindlela ukuze ungazilimazi.
Izinzuzo zokudlala ama-puzzle😀
Ngokuqinisekile uzwile ngefayela le- izinzuzo ze-puzzle. Indlela lolu hlobo lomdlalo oluvuselela ngayo ubuchopho iyamangalisa futhi igcina ikhiqize izinzuzo ezingenakubalwa zabantu beminyaka ehlukene.
Ukuhlanganisa izingxenye ezincane nokukwazi ukwakha iphaneli ekugcineni yi- ukuzivocavoca okuhle kakhulu kwengqondo kwabadala, abadala, intsha nezingane, ikakhulukazi labo abasesigabeni semfundo.
Ngokuvamile, iphazili ilungele inkumbulo futhi lapho isetshenziswa esikoleni, ikakhulukazi emfundweni yezingane zasebusheni, ikusiza kakhulu ukufunda. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngezinzuzo zokusebenzisa leli thuluzi esikoleni, ithini imithetho yalo noma yiziphi izinzuzo ezilinikeza abantu abathanda ukuhlanganisa iphazili? Qhubeka ufunde.
1- Iphazili ivuselela ubuchopho
Igalelo lokuqala elikhulu lephazili lisezingeni lobuhlakani, ngoba iphazili lishukumisa ubuchopho. Ngakho-ke, i- ukuthuthukiswa kwamakhono okuqonda kuyinzuzo enkulu.
Umsebenzi unomthelela oqondile emandleni engane okuxazulula izinkinga, ukucabanga okwandayo nokwenza ngcono amakhono akho. Ulwazi lwezinombolo, imibala, ukwakheka, amamephu, isikhala, ithrafikhi, neminye imikhakha eminingi yolwazi kungakhuthazwa.
I-2- Puzzle ilungele inkumbulo
Enye into efanelekile yokusebenzisa iphazili ukuthi ilungele i- inkumbulo . Lo mnikelo ubalulekile kubantu abanezinkinga ezihlobene nokukhohlwa.
Lokhu kwenzeka, ngakho-ke, ukuthola izingcezu ezifanele ngayinye kwenza umuntu aqoqe imininingwane mayelana namafomethi namabili abo angaba khona. Ungacabanga ukufaka lo msebenzi kubantu asebekhulile abanezinkinga zememori?
I-3- Iphazili ithuthukisa ukusebenzisana kwezimoto
Kunesigaba sobuntwana lapho izingane zidinga ukuthuthukisa amakhono azo emoto. Izingalo neminwe yakhe namanje abazi ngezindawo ezakhiwe nokuqhathwa kwezinto.
Ngakho-ke, iphazili ebhekiswe kulezi zilaleli ijwayele khuthaza ukuhlangana kwezimoto ngisho nasekuqaleni kwengane . Ukuzama ukulingana ingxenye eyodwa encane kwenye kuyisikhuthazo esikhulu sokulawula ukunyakaza kwengalo, iso, nezandla.
Kodwa-ke, iphazili kufanele ihambisane nobudala obuthile bengane, ngezingcezu ezinkudlwana, ezinemibala egqamile nokufakwa okulula kakhulu. Kusebenza nakwabantu abadala noma asebekhulile abanobunzima bokuxhumanisa.
I-4- Iphazili idala ukuxhumana komphakathi
Isikhathi sesikole yisigaba sokuzivumelanisa nezingane. Ukwakhiwa kwabangane kanye nokuhlonza amaqembu kanye nombono womphakathi yizinjongo ezibalulekile ezinganeni zesikole.
Futhi ukufeza le nhloso, i- iphazili iyithuluzi elihle lokuzijabulisa . Ngesikhathi sokudlala, izingane zingasebenzisana, zisebenzisane, zincintisane, zinqobe, ziphikisana, zabelane ngempumelelo kanye nokwehluleka nekilasi lonke.
I-5- Puzzle ikhuthaza ukuqonda
Lo mdlalo uphinde ukhuthaze umbono wezingane zesikole. Amakhono wokubuka, ukuqhathanisa, ukuhlaziya nokuhlanganisa imibono yizimpahla ezizosiza emfundweni yengane ngayinye .
Lokhu kuzuza kudlulela ebusheni nasebudaleni, kube izimfanelo eziyigugu kakhulu emkhakheni wobungcweti. Umbono wezinkampani ezinkulu, wamathuba emakethe ungazalwa ebuntwaneni, ngezisusa ezifanele.
Emakethe, iphazili inezinguqulo eziningana. Futhi kufanele kukhunjulwe ukuthi bangaba nobukhulu obuhlukahlukene hhayi nje labo ababekwe endaweni eqondile nasebangeni elilodwa.
Izinhlobo zamaphazili zendabuko yilezi: I-Bedlam cube, i-cube yomlingo, i-sum cube, i-Pentaminos ne-Tangram. Thola imininingwane eminingi ngalezi zinhlobo zamaPuzzle:
Lo mdlalo uqukethe Izingcezu eziyi-13 ezakha ikhiyubhu ephelele.Kuyimpicabadala eyasungulwa nguBruce Bedlam. Sekukonke, kunezingcezu eziyishumi nantathu ezakhiwe ngamacube. Umqondo ngukuthi wakhe i-cube engu-4 x 4 x 4 futhi ube nobuciko, ngoba inselelo ukuthola enye yezindlela ezingaphezu kwezinkulungwane eziyi-19 zokwenza.
Le nguqulo ithandwa kakhulu phakathi kwamaphazili ngefomethi ye-3D.
I-cube yomlingo yinto endala esiyaziyo. Igama layo elisemthethweni yiCube kaRubik, igama elihlonipha umqambi walo, u-Ernő Rubik waseHungary. Yasungulwa ngo-1974 futhi yazalwa inkulu - yawina indondo yeGame of the Year. Ama-1980 ayengumphumela wale phazili, osasakazeka nanamuhla.
Bangama-polyethylene cubes ahlangana ndawonye akha ikyubhu.
Lolu olunye uhlobo lwephazili elimise okwe cube. Yasungulwa nguPiet Hein, owayidala ngemuva kokufunda isigaba se-quantum mechanics. Umdlalo usebenzisa ama-cubes e-polyethylene ayisikhombisa ahlanganayo akha ikyubhu engu-3 x 3 x 3. Lezi zingcezu zakha izinhlobo zomhlangano ezingaphezu kuka-240.
Lokhu puzzle has izikwele ezinhlanu zihlelwe ngezindlela ezahlukene. Sekukonke, kunezakhiwo eziyi-12 Pentaminó. Le phazili yaphefumulela imidlalo yeTetris noma yeRampart yekhompyutha. Lo mdlalo ugqozi iTetris edumile.
El i-tangram Inezicucu eziyisikhombisa kuphela ezingakha izibalo ezingaphezu kuka-5,000 XNUMX.
Yilokho iphazili noma i-jigsaw ngokwesiko ngokwengeziwe, uma kuqhathaniswa namafomu athengiswa kakhulu namuhla. Wazalelwa eChina enezicucu eziyisikhombisa futhi bebonke benza izibalo eziningi. I-encyclopedia ize ifike ithi kungenzeka ukuthi kuqoqwe izibalo ezingaphezu kuka-5,000 XNUMX. Ngaphandle kokungabaza, kwaba ugqozi lwemidlalo yama-puzzle enobukhulu obudume kangaka namuhla.
El iphazili enkulu kakhulu ibizwa ngegama "UKeith Haring: ukuphindaphinda kabili"Inezicucu ezingama-32,256, zikala cishe u-5.44mx 1.92m kanti ukupakishwa kwayo kunesisindo esingu-17kg omuhle.
Ukukhiqizwa kabusha komdwebo "Ukuhlangana"nguJackson Pollock uthathwa njengelinye lamaphazili anzima kakhulu ukuhlanganiswa.
Ngo-1997, ePeru, iqembu labashokobezi iMovimento Revolucionario Tupac Amaru lahlasela indawo yokuhlala yenxusa laseJapan, linabathunjwa abangaphezu kuka-72 futhi bekhungathekile ngezingxoxo, bacela Iphazili elingu-2,000 XNUMX. Lokhu kwenzelwe ukuthi abathumbi babe nokuzilibazisa futhi bangacindezelwa kakhulu izingxoxo.
Ngo-1933, amaphazili waqala ukuba amakhadibhodi. Ngaphezu kwakho konke, yenze ukuthi ishibhile, yaze yakhiqiza nokuthengisa okungaba yizigidi eziyi-10 ngeviki!